Siilaanyo oo casho sharaf xalay Hargeyso ugu sameeyay wefdigii dhowaan halkaa gaaray- Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha maamulka Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa xalay casho sharaf u sameeyey xubnaha ururada bulshada rayidka ah ee dhowaan gaaray deegaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliya si ay u gaarsiiyaan kaalmo lacageed oo dhan hal milyan oo doollar looguna talagalay dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku dhaqan deegaanadaasi.
Nabadoon Maxamed Xasan Xaad, oo kamid ahaa mas’uuliyiin halkaasi dhowaan gaaray oo kulanka cashada ka hadlay ayaa u mahadceliyay mas’uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland si wanaagsan oo ay u soo dhoweeyeen mudadii ay halkaasi ku sugnaayeen.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, oo ah guddoomiye ku xigeenka hey’adda culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in la isku gurmado in ay tahay mid qeybka ah Islaamnimada, walaaltinimada iyo Soomaalinimada isla markaana sidan oo kale ay Soomaaliland sameeyeen xilligii abaaraha ay ka jireen koofurta Soomaaliya sanadkii 2011ka.
Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland, Maxamuud Xaashi Cabdi,wasiirka diinta iyo owqaafta Sheekh Xasan C/salaam, oo kulanka ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadceliyay wefdiga u soo gurmaday dadka walaalahooda ah oo ay abaaraha halakeeyeen.